I-Hazards Rim ~ Ihlathi, intaba nolwandle - I-Airbnb
I-Hazards Rim ~ Ihlathi, intaba nolwandle
-SINEMIKHUBA EQINILE NGE-COVID-SAFE ENDAWENI-Izingozi Rim ogwini olusempumalanga ye-Tasmania yindlu yasogwini eklanywe izakhiwo enikeza okuhlangenwe nakho okuyingqayizivele nokunethezekile endaweni yemvelo.
Indlu yasogwini ibekwe emaphethelweni eFreycinet National Park, isango eliya eWineglass Bay. Izungezwe ihlathi le-Hazards Rim iqhele ngamamitha ayi-100 ukusuka olwandle oluvikelekile futhi iseduze namathrekhi okuhamba e-Wineglass Bay.
Izinguquko zokuphepha ze-Covid okumele uziqaphele ngaphambi kokufika kwakho:
Ngenxa yokuphepha kwe-Covid, siye selulekwa ukuthi sisuse izinhlinzeko nezinsiza ezingeke zihlanzwe kalula futhi singaqhubeki nokuhlanza izitsha zokudla neziqukathi zesiphuzo. Lokhu kuhlanganisa izinto ezifana nezitsha zikasawoti & pepper kanye namafutha okupheka. Izinto zekhadibhodi ezifana ne-al foil, ukugoqa okunamathelayo, amathawula ephepha nezicubu njll sezikhishiwe okwamanje.
Nomaphi lapho singakwazi khona, sishintshele ezintweni ezihlukaniswe ngazinye njengamandla esitsha, amandla okuwasha, itiye, ikhofi, ushukela, usawoti kanye namasaka kapelepele.
Zonke izinto zikhokhelwa, futhi azifakiwe emalini, futhi zinikezwa mahhala ngumnikazi wendawo.
Sithemba ukuthi lesi yisinyathelo sesikhashana kuphela futhi singabuyela ezinqubweni zethu ezivamile maduze, kodwa silandela imithetho eqinile ephephile ye-Covid nemihlahlandlela, okuhlanganisa nokuba nohlelo olujulile lwezokuphepha lwe-Covid kanye nezinqubo zokuhlanza ezithuthukisiwe nezanele.
Siphinde sasusa ama-comendums futhi sinenguqulo ye-inthanethi yezivakashi, lokhu sikuthumelela izivakashi nge-imeyili futhi kukhona nekhodi ye-QR endaweni ukuze ufinyelele lolu lwazi kudivayisi yakho siqu.
Lezi zinguquko zikhona ukuze kugcinwe izivakashi ziphephile, futhi kubalulekile ukuthi senze konke esingakwenza ukuze siqinisekise ukuthi izivakashi zihlala ziphephile ngangokunokwenzeka ngenkathi zihlala kunoma yiziphi izakhiwo ze-Freycinet Holiday Houses.
4.63 out of 5 stars from 267 reviews
4.63 · 267 okushiwo abanye
Inombolo yepholisi: DA2016/00162